Indhuhu Way Arkaan Waxqabadka Wasiirka Caafimadka Diyaariye Abdirahman faqaatiir
Friday June, 22 2018 - 04:19:32
Friday August 25, 2017 - 13:41:15 in by salman abdi
Indhaha caafimadka qabaa way arkaan horimarka balaadhan Wasiirka caafimadku uu qaybTay.
wasaarada caafimadka somalilnad wax ay ka joojisay ,ilahayn la kaashatay baryadiisa, daaweynta cudurada ka dilaacay gobolo badan oo Somaliland ah waxay wasaardda caafimadka ee uu gadhawadaynta ka yahay wasiirka caafimadka waxay samaysay ka horta iyo joojin , daaweyn aad u laxaad wayn wasiirku wuxuu ku amaanan yahay isaga iyo shaqaalihiisa guud ee wasaarada caafimadka siday ugu gurmadeen dadkii u asiibay cudurka faafa ee shuban biyoodka . taasoo ay ku dhinteen 48 qof qaar kalena ay wali xaladooda wali lala dedaalayo halka ku dhawaada 40000 kun oo qof shacab ah xaaladooda la badabaadiyey oo ay wasaaradu caafimadka ku amaanan tahay ilahayn uu la garab galay. Iyadoo wasiirka caafimadka iyo agaasimayaashiisu ay soo dhigeen qorshe fiican oo looga hortigi karo si aanu ufaafin una badbaadiyaan inta cudurka shubanka u jiifta taasinwaxay keentay inay ku guulaystaan qorshihii ay soo dhigeen ,ilahay ayaa mahada leh
1.Wasiirka Caafimadka Somaliland . Dr.Saleebaan Ciice Xaglotoosiye
2.Agaasimaha guuda wasaaradka caafimadka somaliland
3..agaasimaha cudurada guud ee faafa .Abiib Adan Nuur Faarax
4..Lataliya wasiirka caafimadka arimaha haayadaha, Dr shine cuqale
Tan iyo intii loo magacaabay wasiirka wasaaradda caafimadka somaliland.Dr.saleebaan ciise xagalo toosiye, Indhaha caafimadka qabaa way arkaa waxa qabadka guud ee wasaaradda caafimadka Somaliland. Wasaraddu waxay ku talaabsadatay iyadoo ay jiraa duruufo adag ,oo abaareed ,ku baahay dhamaan deegaanada Somaliland , wasiirka caafimadku wuxuu qabatay intii xilka loo magacaabay shaqooyin iyo faa,iidooyin dhica aqoonta shaqlaaha iyo isagoo shaqaalaysiiyey dhalinyaro badan oo caafimadka qaybihiisa kala duwan bartay.wasiirku waxa kaloo uu aad usoo kiciyey , dhismooyin badan oo xarumo caafimadka oo lugu xanaaneeyo dhalaanka iyo caruurta, hooyooyinka ,xarumaha qaaxada oo uu ka hirgaliyey gobolo badan oo hore u lahayn ama ay ku yaraayeen ,isagoo qalab badan casriya ah qaybiyey xarumaha caafimadka , uu ka hirgaliey dhamaan gobalada Somaliland ,iyadoo wasaaradda caafimadka
Wasiirka caafimadka Somaliland wuxuu hawal galiyey sidii ay uga qayb qaadan lahayd ka wasaarada ahaan abaarihii ku dhacay dalka Somaliland iyadoo si laxaad wayn oo taakulayn lahaa uga qayba qaatay gurmadkii abaaraha ku habsaday shacabka Somaliland .
Wax kale oo wasiiraku si mugwayn oo aan la dafiri Karin ka qayba qaatay nabadayntii gobalada bari iyo soo xarayntii khaatumo SSC
BAAHINTA AdEEGYADA CAAFIMAADKA EE JOOGTADA AH
1. Xoojinta adeegyada joogtada ah Waxa si joogta ah u helay agabkii caafimaadka iyo daawo dhamaan xarumaha caafimaadka adeegyada caafimaadkana u bixiya si joogta ah 2. Waxaa tababaro loo sameeyey shaqaale caafimaad oo lagu tababarey barnaamijyo kala duwan dalka gudihiisa. Tabarada dibada: 3. Waxa dayactiro lagu sameeyey Isbitaalada Magaalooyinka Xarunta caafimaadka gobolka Somaliland oo dhan welina uu dayactir uu socdo 4. Waxaan dib loo furay Xarumo caafimaad oo xidhanaaraa iyo kuwo cusub si loo balaariyo adeegyada cafimaadka.
Xarumaha hooyada iyo Dhalaanka ee Xarumaha Qaaxada; waxaa la furay xarunta Qaaxada Waxaa sare loo qaaday Baarista iyo la talinta Ej-Ay-Fiig Aydhis .
OLOLAYAASHA AY WASAARADA CAAFIMAADKA AY QABATEY XAKAMEYNTA CUDURADA FAAFA Waxa wasaaradu ka jawaabtey shuban biyood ka dilaacey deegaanada badan oo ay ka mid yihiin gobalka togdheer oo wali shaqalaaha cafimaadka hawashii wadaan Waxaa ay wasaaradu ka jawaabtey jadeeco ka dilaacday magaalooyinka gobolka saahil iyo gobolka togdheer gobolka sanaag Waxaana .
Isku soo wada duuboo wasiir xagalo way xusi doontaa taariikhada Somaliland iyo shacabka reere somalilandab
Diyaariye Abdirahman faqaatiir